विविध Archives » Page2of 11 » Nepal Europe News
Ishwor Bhandari April 24, 2016 April 24, 2016 विविध, समाचार	0
काठमाडौं, बैशाख १२ । गोर्खा भूकम्पको एक वर्ष पूरा भएको छ । ठीक एक वर्ष अगाडि आजैका दिन अर्थात् २०७२ साल वैशाख १२ गते गोर्खाको बारपाक केन्द्र बनाएर गएको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्यूडको भूकम्पले आधा नेपाललाई तहस नहस बनाइदिएको थियो । करिब नौं हजार मानिसको मृत्यु भएको उक्त भूकम्पमा २२ हजारभन्न्दा
Ishwor Bhandari April 23, 2016 April 24, 2016 विविध, समाचार	0
काठमाडौं- विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का निलम्बित अध्यक्ष गणेश थापाको अपील खारेज गरेको छ । थापाले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै फिफाले गत कात्तिक २३ गते १० वर्षसम्म फुटबलका कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि थापाले फिफामा अपील गरेका थिए । फिफाको इथिक्स
Ishwor Bhandari April 21, 2016 April 23, 2016 विविध	0
गोकर्णप्रसाद भण्डारी दोलखा, ९ वैशाख । उमेरले बिहे गर्ने समय घर्किसकेको भएपनि थामी जातिका युवायुवतीले आफ्नो बिहे अघि आमाबुबाको बिहे सम्पन्न गर्नुपर्छ । थामी जातिको धार्मिक संस्कारअनुसार बाबुआमाको बिहे नगरी छोराछोरीको बिहे गर्ने बेला बिते पनि परम्पराअनुसार बिहे गर्न मिल्दैन । आफ्नो विवाह सम्पन्न गर्न धार्मिक परम्परा फुकाउन दोलखाको आलम्पु–१ का माइकल
Ishwor Bhandari April 17, 2016 April 17, 2016 विविध, समाचार	0
दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा पर्ने राज्य इक्युडोरमा ७.८ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पबाट २८ जनाको मृत्यु भएको त्यहाका उपराष्ट्रपति जोर्ज ग्लासले जानकारी दिएका छन्। ३०० किलोमिटर तलबाट आएको भूकम्पले कोस्टलको शहर नजिकै रहेको मुइस्ने, गुयाक्वेललाई केन्द्र बनाएको त्यहास्थित स्थानीय सञ्चार माधयमले बताएको बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पले क्विटो शहरमा रहेका घरहरु, भवनहरु ढलेका
Ishwor Bhandari April 16, 2016 April 17, 2016 विविध, समाचार	0
काठमाडौं- आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपमा नेपालले पहिलो जित हासिल गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले नामिबियालाई ५ विकेटले पराजित गर्दै पहिलो जित हासिल गरेको हो । घरेलु मैदानमा शरद भेषावकर र विनोद भण्डारीले उत्कृष्ट साझेदारी गरेसँगै नेपालले एक सय ९६ रनको चुनौती ४७ ओभर १ बलमा
Ishwor Bhandari April 11, 2016 April 12, 2016 विविध, समाचार	0
काठमाडौं- नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७३ लाई घुमफिर वर्ष २०७३ कोरुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । बोर्डले सोमबार यस अभियान सार्वजनिक गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी दीपकराज जोशीले नयाँ वर्षमा कम्तिमा एउटा नयाँ ठाउँ घुम्ने प्रतिबद्धता गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे । कार्यक्रममा उपस्थित पर्यटन व्यवसायी, सरकारी
विश्व बरियतामा नेपाल छ स्थान माथि
Ishwor Bhandari April 8, 2016 April 8, 2016 विविध, समाचार	0
काठमाडौँ- फुटबलको विश्व बरियतामा यो महिना छ स्थान सुधार गरेको नेपाल १७९औँ स्थानमा उक्लिएको छ । विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले आज सार्वजनिक गरेको बरियतामा नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौँ स्थानमा छ । पाँच स्थान सुधार गरेको अफगानिस्तान १४७औँ स्थानका साथ पहिलो स्थानमा छ । दुई÷दुई स्थान तल झर्नका बाबजुद क्रमशः १६० र १६२औँ
Ishwor Bhandari April 4, 2016 April 4, 2016 विविध, समाचार	0
एजेन्सी काठमाडौं- संसारमै सबैभन्दा गोप्य ढंगले काम गर्ने मानिएको पनामाको मोसाक फोन्सेका कम्पनीको एक करोड दश लाख गोप्य दस्तावेज लिक भएको छ । जसमार्फत् धनी र शक्तिशाली व्यक्तिहरुले कसरी आफ्नो धनसम्पत्ति लुकाउन कर छली गर्दा रहेछन् भन्ने खुलेको छ । उनीहरुले आफू र आफनो कम्पनीबाट कमभन्दा कम कर तिर्न कस्ता कस्ता शैली
विश्वकप ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि वेस्ट इन्डिजलाई
कोलकाता- विश्वकप ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि वेस्ट इन्डिजले हासिल गरेको छ । गएराति सम्पन्न फाइनल खेलमा इङ्ल्याण्डलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै वेस्ट इन्डिजले उपाधि हासिल गरेको हो । टस जितेर पहिलो फिल्डिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले इङ्ल्याण्डलाई १५५ रनमा सीमित गरेको थियो । इङ्ल्याण्डले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा उक्त
उफ् ! यो कस्तो पीडा : दुई दिनमा दुई छोराको निधन
Ishwor Bhandari April 3, 2016 April 4, 2016 विविध, समाचार	0
बुटवल- उफ् ! भन्दा पनि मन जिरिङ्ग हुन्छ । हिजो शनिबार एउटा छोराको उपचारका क्रममा निधन र आज आइतबार अर्को छोराको निधन । दुई दिनमा दुई छोराको देहान्त । सायद अहिलेसम्म नसुनिएको घटना रुपन्देहीका एक सञ्चारकर्मीमाथि बज्रपातका रुपमा आइलाग्यो । हास्यकलाकारको रुपमा माइलाबाको परिचय बनाउनुभएका विष्णुजी पाण्डे र उहाँकी पत्नी शोभा